Viva Hein's Hnote Ma Set Chin Buu Music Video | Myanmar Celebrity Gossip & News
Viva Hein's Hnote Ma Set Chin Buu Music Video
မကွေးတိုင်းမှ ဆရာတော် အရှင်တေဇိန္ဒ (ကမ်းပျိုရွာ) စီစဉ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဗီဗာဟိန်း ရဲ့ နုတ်မဆက်ချင်ဘူး သီချင်း ဗီဒီယိုပါ။ ဒီဗီဒီယိုကို ဦးဇင်းတွေက Cameraman အဖြစ် ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Download Mp4 Video!
narkakoFebruary 25, 2011 at 2:01 PMwhat the heck is happening in myanmar??? are they really buddhism???ReplyDeletekoFebruary 25, 2011 at 2:49 PMoh . this one make me cry . suchashame . we r Buddhism and should not do like that . i am so up set . they destroy our religion.ReplyDeleteo@sisFebruary 25, 2011 at 3:22 PMSuchaShame, Brainless...ReplyDeleteaung soeFebruary 25, 2011 at 4:33 PMI doubt that if they are really buddhism or not.ReplyDeleteKYAW NAINGFebruary 25, 2011 at 5:01 PMma ma fat fat,, ma ma pig pig,,ReplyDeletemasterFebruary 25, 2011 at 5:42 PMWe absolutely condemn this video clip. Please do something to punish to those who made this video clip.Please.....Please...Please never ever do this kind of video clip again in the holy ground of Buddhist Monastery.ReplyDeleteshunFebruary 25, 2011 at 7:08 PMစိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဒီလိုလုပ်ရဲတယ်နော်လှုပ်နေလိုက်တာများပြုတ်ထွက်တော့မယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်ရင်လဲတခြားနေရာေ၇ွးပါလားသာသနာကိုဖြတ်နေလားစိတ်ချဒီလိုလူမျိုးဒီတသက်အားမပေးဘူးမြဲမြဲမှတ်ထားဒေါ်ဗီဗာဟိန်းဆိုတဲ့အန်တီရေReplyDeleteMorris HtunFebruary 25, 2011 at 7:51 PMthis is justajoke..right ? OMG!ReplyDeletesFebruary 25, 2011 at 7:53 PMဘယ်လိုဖြစ်ရတာလည်းအရပ်ကတို့ရေ။ဘုန်းကြိးကျောင်းဝိုင်းထည်းကမြန်မာမှု့မဖြစ်တဲ့မန်ြမာသံသီချင်းကိုန်ြမာဘုန်းတော်ကြိးတွေကိုယ်တိုင်ဘာမှန်းမသိတဲ့ဆက်စီအကလိုလိုတကိုယ်လုံးခါပြနေတာကိုကိုယ်တ်ုင်ကိုကြမှတ်တမ်းတင်နေပြီဆိုတော့သာသနာတော်ကြီးကိုဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းဘုရားသားတော်တွေကပဲဖျက်နေပြီပေါ့။ReplyDeletesFebruary 25, 2011 at 7:56 PMသာသနာဖျက်တွေရဲ့သာသနာဖျက်လုပ်ရပ်တွေကြောင့်သာသနာကြီမပျက်ရအောင်သာသနာသန့်ရှင်းရေလေးလုပ်ကြပါဦးဆိုင်ရာပိုင်ရာတို့ရေReplyDeletenanzinFebruary 25, 2011 at 8:12 PMOMG...It isavery shameless act to Buddhism...Moreover, I feel very sad that Monks are the producers and monks are also the one who is recording and distributing those video with dirty sexy dances which are totally opposed to the rules of Buddha... Oh...Buddha,with your infinite power and intelligence, please protect Buddhism, and please help to stop those monster-monks not to destroy our valued religion...ReplyDeleteangelaFebruary 25, 2011 at 8:29 PMသူ့ ကိုယ်သူများ နဂို ပါရမီ ခံရှိလို့ ဒီလိုကတတ်တယ်ဆိုပဲ .. ရီရတယ်. ဟုတ်မှာ နဂို ပါရမီခံဆိုတာ ဖာရမီခံ ကို ဆိုလိုတာပဲ ဖြစ်ရမယ် .. မျောက်မဝဝလေးတကောင်ကို ကခိုင်းရင်တောင် သူ့ ထက်ပိုကြည့်ကောင်းဦးမယ် ပီပါဟိန်းရေ ...ReplyDeleteWALLPAPERFebruary 25, 2011 at 8:31 PMwhat the hell ???suckReplyDeleteKaungFebruary 25, 2011 at 9:20 PMIt shouldn't be so as this is in myanmar with traditional respect .I'm sure she don't be shyReplyDeletevamFebruary 25, 2011 at 11:52 PMHey fucking damm girl,If you wan fuck we can help, pls don't do at religion place, come out, we waiting on the road.may i help you. from , Mr. aung nat, Mr. goat kyar,Mr. mae lone,and friends.ReplyDeletechanFebruary 26, 2011 at 12:09 AMငရဲကို မသိလို့များလားနော် .... ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ ... သံဃာတော်ရှေ့မှာ ကခုန်ဖို့ မပြောနဲ့ ရှေ့တော် ကြွလာရင် ဖိနပ်ချွတ် လက်အုပ်ချီပီး ကန်တော့်ရတာ အခုတော့ .... ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရော ဟုတ်ရဲ့လားကွယ် ....ReplyDeletechochoFebruary 26, 2011 at 12:42 AMနိုင်ငံတော်သံင်္ယနာယ. အဖွဲက လူကြီးမင်းတို့..ဘာလုပ်နေလဲ....ဘာလုပ်မှာလဲ...သာသနာရေးက လူကြီးမင်းများ....ဒါကို...ကြည့်နေရင်...နောက်ခေတ်မယ်..........နောက်လာမယ်..လူငယ်တွေခေတ်မှာ...သာသနာ..နဲ့ ဗုဒွဘာသာဝင်.ဘာသာရေး..တွေက...ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ..ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကို...လူကြီးမင်းများသိသင့်ပါတယ်.....ReplyDeleteAAky!!February 26, 2011 at 12:44 AMဆိုးရွာလိုက်တာနော်...........စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ...........တခြားဘာသာဝင်တွေ အတွက် အထင်သေးစရာတကွက်ရသွားပြန်ပြီပေါ့.......ReplyDeletephyoFebruary 26, 2011 at 12:49 AMwhat are they doing? I can't believe my own eyes...so sad.... T_TReplyDeletemayFebruary 26, 2011 at 1:08 AMရင်ထဲမှာ ...တော်တော်မကောင်းဘူး....တို့အဘိုးအဖွား..အဆင်အစက်ယုံကြည်ခဲတဲ..... ဗုဒွဘာသာ...မင်းတို့..လက်ထက်မှာဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ....ReplyDeletechitFebruary 26, 2011 at 1:27 AMဘုန်းကြီးတူမဖြစ်နိင်တယ် ဒါတော့ပြတ်သနာမရှိပါဘူး ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာ ဖိနပ်စီးပြီး ရိုတ်ထားတာကဆိုးတာReplyDeletekokoFebruary 26, 2011 at 2:03 AMနိုင် ငံ ခြား သား တွေ တွေ့ ရင်သာ သ နာ တော် ကြီး ကို အ ရည်း ကြီး သာ သ နာ လို့ ထင် သွား မယ် ။သာ သ နာ သန့် ရှင်း အောင် လို့ ၀ိုင်းဝန်း လုပ် ကြ ပါ ဦး ဗျို့ ။သာ သ နာ ကို သက် ၀င် ယုံ ကြည် မှူ့မ ရှိ ဘဲ စား ပေါက် ထွင် ချင် လို သင် ကန်း ၀တ် လာ တဲ့ကိုယ် တော် တွေ ကို နိုပ် ကွပ် ပေးပါ။ နို့မို ဆို ရင် တ ခြား ရဟန်း တော် များ ကို ပါ အ ကြည် ညို ပျက် မှာ စီုး လို့ပါ။ ။ReplyDeletekokoFebruary 26, 2011 at 2:08 AMဟဲ့အ ကောင် ဗို ဟိန်းနင့်သ မီး ရွ နေ တာ ကို ဘယ် မျက် လုံး နဲ့ကြည် နေ လဲ။ReplyDeleteyvonnehtikeFebruary 26, 2011 at 2:23 AMthe way she dances make me wanna vomit. whoever involved in this video has no brain....ReplyDeletemissFebruary 26, 2011 at 2:28 AMသာသနာတော် အတွက်စိတ်ထဲတောင်မကောင်းဘူး ။။ စဉ်းစားစရာတခုကမကွေးတိုင်းမှ ဆရာတော် အရှင်တေဇိန္ဒ စီစဉ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတာဆိုတာတကယ်လားဘုန်းဘုန်းတွေကိုအကြည်အညိုပျက် အောင်တမင် ဖန်တီးထားတာလားစိုတာစဉ်းစားစရာပဲReplyDeletekyawFebruary 26, 2011 at 3:03 AMwhatalow class people? Go to hell......ReplyDeleteJuniaFebruary 26, 2011 at 3:06 AMewwww...WTF!!!lok disgusting:/ReplyDeleteYanant ChoFebruary 26, 2011 at 3:44 AMအင်မတိအင်မတန် အော့နှလုံးနာစရာကောင်းပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝိုင်းထဲ ဘုန်းကြီးရှေ့မှာများ..မယုံနိုင်အောင်ကိုပါပဲ။ တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေပြီ။ReplyDeleteArpuFebruary 26, 2011 at 4:54 AMဘုန်း ဘုန်းလည်း နာဘူးဘူး.....ReplyDeleteathimchaeFebruary 26, 2011 at 5:13 AMဆိုးလိုက်တယ့်ဟာတွေ.....လူမှန်ရင် လူလိုတော့သိတတ်ပေါ့...လူ ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုရောနားလည်ရဲ့လားမသိဘူးReplyDeletezawFebruary 26, 2011 at 5:31 AMchocho@...နိုင်ငံတော်သံင်္ယနာယကအဖွဲ့ဆိုတာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ကြပါဘူးကွယ်....သံဃာတော်တွေနဲဖွဲ့စည်ထားတဲအဖွဲ့ပါထိုအဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ခွင်ပြုချက်မရပဲဘာမှမလုပ်ကြပါဘူးကွယ်....တကယ်မေတ္တာရှင်ဆရာတော်တွေပါ..မေတ္တာအလွန်အမတန်ကြီးမားလွန်သောကြောင့်...သာသနာတော်ကိုစော်ကားတာလောက်ကိုမဆိုထားနဲ..သာသနာတော်ကိုစောက်ရှောက်နေတဲသံဃာတော်တွေကိုရက်ရက်စက်စက်သတ်နေတာကိုတောင်ကြည်နေသေးတာပဲကွယ်ဒီလောက်ကတော့..အေးဆေးပေါ့ReplyDeletepyarFebruary 26, 2011 at 6:28 AMသူနာမည်ကြီးအောင်လုပ်တာကလဲတမျိုးကြီးပါလားကျနော်ပဲ အနုပညာကိုမခံစားတတ်လို.လား အဲ.ဒီမျောက်မ ပဲ မျောက်က ကနေလို.လားတော.မသိဘူး မျောက်ကကနေသလိုပါပဲရင်နာတာတခုကတော. ဘဘဘုန်းကြီးတွေက ဘာဝင်လုပ်ပြီး ဘူးနေလဲမသိပါဘူး ကိုယ်.ဘာသာ သသနာကို စော် ကားနေတာပဲလို. ခံစားမိပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ReplyDeletetharngeFebruary 26, 2011 at 7:57 AMကောင်မ...ဝက်မ ရူးများနေလား မသိဘူး...သူ့ ဘော် ဒီနဲ့ သူ လှုပ်နေတာနဲ့ က နည်းနည်းမှ လမိုင်းမကပ်...ပါရမီ အခံရှိလို့ ကတတ်တာဆိုပဲ...ဟဟ..ပေါလည်းပေါပ....ReplyDeleteYuYumonFebruary 26, 2011 at 8:08 AMOh My Oh my is she crazy, she keeping on shaking her assWOOW i can't believe she actually did that in front ofamonkshamelessReplyDeletesaintoeFebruary 26, 2011 at 8:29 AMဘယ်သူလဲဆိုတာသေခြာအောင်လေ့လာဂျပါဦးလားကွယ်တို့ ရဲ့ ဒါ တမင်သက်သက်လုပ်ကြံထားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဒီလို ဝိုင်းအော်နေဂျမယ့်အစားသက်ဆိုင်ရာဒေသတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးလုပ်နည်းလုပ်ထုန်းအတိုင်းဆောင်ရွက်ကြပါReplyDeletemamapyogyiFebruary 26, 2011 at 9:28 AMတိရစ်ဆန်မ....ဘုန်ုးကီးကျောင်းမှာ ဒီလိုလုပ်လို.ကတော. ငရဲအိုး ဂျိူးကပ်မဲ.ဟာမ...ဘုန်ုးကီးကျောင်းထဲမှာ ရိုက်စရာရှားလို. အောက်တန်းကျတဲ. အ၀တ်အစားနဲ. အောက်တန်းစား အလုပ်လုပ်နေတာ သောက်ရှက်မရှိတဲ.ကောင်မ...နင်မရှက်ပေမဲ.ုကည်.တဲ.လူရှက်တယ်....ူကည်.ရတာ..ဘုန်ုးကီးတု နဲ. ဘုန်ုးကီးဆီကတောင် ချူစားမဲ. အောက်တန်းစားမ....နင်.ကို ဘယ်သူမှ အားမပေးဘူး...ငရဲသွားမဲ. မသာမ...ReplyDeletesecretFebruary 26, 2011 at 12:14 PMကျွန်တော် စဉ်းစားမိတာလေးပါ...(၁) ဒီဗီဒီယိုက ဘာကြောင့် ဆင်ဆာ လွတ်လာတာလဲ။ မြန်မာပြည်မှာ တကယ် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခဲ့သလား။ အင်တာနက်ပေါ်မှာပဲ ရှိတာလား။(၂) ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာ ရိုက်ထားတာတော့မှန်တယ်။ ဘုန်းကြီးရဲ့ ဆန္ဒအမှန်ပါသလား။ မပါဘူးလား။ ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင် တကယ်ရိုက်တာလား။ လုပ်ကြံ ဖန်တီးတာလား။(၃) ဗီဒီယို စီစဉ်ထုတ်လုပ်သူ ဆိုပြီး ဘုန်းကြီးနာမည် တပ်ထားတာက မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း ဘုန်းကြီးတိုင်းသိပါတယ်။ ဒါဟာ ဘုန်းကြီးတွေ နာမည်ပျက်အောင် လုပ်ကြံဖန်တီးတာလား။ အဲဒီဘုန်းကြီးကပဲ အကျင့်ပျက်တာလား။(၄) ဘုန်းကြီး ကင်မရာနဲ့ ရိုက်နေတဲ့ပုံက ဘာကြောင့် ထည့်သွင်းထားရတာလဲ။ အဲဒီတော့ ခြုံပြီးစဉ်းလားလိုက်ရင် ဖြစ်နိုင်တဲ့အဖြေတွေက-(၁) တရားဝင်ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးခဲ့တာ ဆိုရင် အစိုးရကိုယ်တိုင်ရဲ့ ဖန်တီးချက် ဖြစ်တယ်။(၂) တရားဝင် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခဲ့တာ မဟုတ်ပဲ အင်တာနက်မှာသာ တင်ထားခဲ့တာဆိုရင်(က) တစ်ယောက်ယောက်က ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ ကို အသရေ ပျက်အောင်လုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ (သို့မဟုတ်)(ခ) အဲဒီဘုန်းကြီးက အကျင့်ပျက်သူ အမှန်ဖြစ်တယ်။ သူ့ကို သံဃာတော် အဖွဲ့အစည်းက အရေးယူသင့်တယ်။အဲဒီမျောက်က က နေတဲ့ ၀က်မကတော့ အထူးတလည် ပြောစရာမရှိတော့ပါဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်က လုပ်ကြံဖန်တီးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘုန်းကြီးအကျင့်ပျက်ပြီး ရိုက်ကူးတာ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူကတော့ ငရဲအိုးထဲ ဒိုက်ဗင်ပစ်ဆင်းမဲ့ ဟာမ ပါ။ မတော်လို့ ညှော်နဲ့ထွက်လာရင်တောင် မသတီစရာ... ဝေါ့။ReplyDeleteWinFebruary 26, 2011 at 1:47 PMwhat the heck is going on in our country?It is clear that they shoot this video inside the monastery compound. Next, look at the director and cameraman, they are all monks. What are they doing for this video. Please maintain the religion and values it. Are they interested in shooting this kind of video or being sons of Buddha.Let them know they are in the wrong place and wear the wrong clothes.ReplyDeletegraceFebruary 26, 2011 at 4:41 PMအခုမှဗီဗာဟိန်းရဲ့ နူမဆက်ချင်ဘူးသီချင်းမှာကနေပုံကို လူသိများလာတာပါ တကယ်ကတင်ထားတာကြာပါပြီ တကယ့်အစစ်ပါ...........သူကိုယ်တိုင်ပြန်ချေပထားတဲ့ကွန်မန့် တွေကလည်း ရိုင်းစိုင်းလွန်းပါတယ်........ဆင်ဆာလွတ်လာတာကတော့အခုခေတ်ကအပေါ်တပိုင်းနဲ့ အောင်တပိုင်းဖော်တာကိုတောင်ခွင့်ပြုလို့ တိုတက်လာကြတာမှာဗီဗာဟိန်းဝတ်တာကကြည့်ရဆိုးပြီးကတာကလည်းစရိုက်ဆန်ပေမယ့်လုံခြုံနေသေးတာကိုးးးးးးးးးးးဘာဖြစ်ဖြစ်သားသတ်ရုံကဝက်မကြီးသေခါနီးမြူစွယ်နေသလိုပဲရွှံစရာကြီးကုန်းလိုက်ကွလိုက်ကားလိုက်နဲ့ လုပ်ပြနေတာကဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲမယ် အရမ်းကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ReplyDeletesweetFebruary 26, 2011 at 4:44 PMမြင်သမျှစိတ်ပျက်အောင်ရွပါတဲ့မပီပါဟိန်းဟိဟိReplyDeletedaFebruary 26, 2011 at 8:11 PMdo not own anythingReplyDeleteSeptember MoeFebruary 26, 2011 at 8:32 PMကွန်မင့်တွေ ဖတ်ရတာ ပိုတောင် စိတ်မချမ်းမြေ့စရာပဲ ဗျ ...ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ဗျာ ....ဆင်ဆာတွေ ဒီလောက်ကြပ်နေတဲ့ ကြားထဲက ဒီပုံစံ ထွက်လာတာ ဟာ တော်တော် လေးကို အံ့သြစရာ ပါပဲ ... ဘုန်းကြီးနာမည် စာသားပါလာတာရယ် ဘုန်းကြိး ကင်မရာကိုင်း ရိုက်နေတာကို ယို့တို့ ရိပ်တိပ် မြင်လိုက်ရတာကတော့ .... အထူး မပြောချင်ပါဘူး ... ကိုယ်လုပ်ချင်သလို လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းပညာခေတ်ပဲဗျာ... (ပါတဲ့ ကိုယ်တော်ပုံကလဲ ... ၀ါးတားတားပါ ... ဖြတ်ဆက် ညှပ်ထားတဲ့ ပုံဆိုတာ သေချာပါတယ် )ဒီဝက်မကတော့ အထူးပြောစရာ မလိုပါဘူးး ... သူ့လမ်း သူလျှောက်ပါလိမ့်မယ် ...ဒါဟာ .... တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ချက်ဆိုတာ သေချာတယ် ... (အပေါ်က secret ပြောသလိုပါပဲ ဗျာ ... )ReplyDeleteမောင်ဥက္ကာငယ်February 27, 2011 at 3:02 AMကွန်မန့်ရေးတာသိပ်ဝါသနာမပါဘူး....ဒီတခါတော့ဝင်အားပေးလိုက်ဦးမယ်ပီပါဟိန်းရေ..မင်းခွေကိုစကြည့်မိကတည်းက..ကျက်သရေအတော်နည်းတဲ့မိန်းမလို့သိလိုက်တယ်..မင်းကိုယ်မင်းရောမှန်မှာကြည့်မိပါသလားကွယ်..။ဦးဘိုဟိန်းရေ..ခင်ဗျားသမီးကိုမိမဆုံးမဖမဆုံးမလို့သတ်မှတ်လိုက်ရတော့မှာပဲ...စဆိုကတည်းက..နတ်စိမ်းတွေကို..အဖေ.အဖိုးတင်ပြီးကိုးကွယ်တဲ့သီချင်းတွေနဲ့စလာတာ...သားအဖနှစ်ယောက်လုံးးကိုပြောလိုက်မယ်...ပိုက်ဆံရရင်ပြီးရောဆိုရင်လည်းဗျာ..သားအဖနှစ်ယောက်လုံးသာ..လုပ်စားလိုက်ကြတော့..ကျွန်တော်တို့ကြော်ငြာပေးပါ့မယ်..။ကင်မရာမင်းဦးဇင်းတွေကိုတော့မပြောပါနဲ့ဗျာ..၀ါသနာပါရင်..သင်္ကန်းချွတ်လိုက်ကြပါလား...ခင်ဗျားတို့ကမြင်းကြောထကြတာ..ပြဿနာမရှိပါဘူး...သာသနာထိခိုက်တယ်ဗျာ..။သံဃနာယကတို့....မျက်စိမှိတ်ပြီးတရားချည်းမထိုင်နေကြပါနဲ့..ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာ..သာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်..ချီးမြှောက်ထိုက်သူကိုချီးမြှောက်...ဖယ်ရှားသင့်သူကိုဖယ်ရှားကြပါဦးလေReplyDeletehtainFebruary 27, 2011 at 4:03 AMstupid lady .I don't like it.it's really awful.SHAME ON YOU.ReplyDeleteမိုးFebruary 27, 2011 at 4:12 AMမြူးမြူးကြွကြွလွတ်လွတ်ကချင်တယ်ဆိုရင် နောက်ဆို သင်္ချိူင်းကုန်းသွားကပါ ကခုဟာက ဘုန်းတော်ကြီးတွေ နေတဲ့ ကျောင်းဆိုတာ သတိထားပါ ကြားဖူးပါတယ် မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ သူ့ ကျောင်းဝန်းထဲ သံဃာတော်တွေ စကားကျယ်ကျယ် ပြောတာတောင်မကြိုက်ဖူးတဲ့အခုတော့.......ကင်မရာကိုင်ထားတဲ့ ဦးဇင်း ရော 'က' နေတဲ့ကောင်မရော... အားလုံး ဒယ်အိုးမှာ.....ReplyDeleteမျိုးFebruary 27, 2011 at 4:47 AMမြူးမြူးကြွကြွလွတ်လွတ်ကချင်တယ်ဆိုရင် နောက်ဆို သင်္ချိူင်းကုန်းသွားကပါ ကခုဟာက ဘုန်းတော်ကြီးတွေနေတဲကျောင်းဆိုတာသတိထားပေါ့ ဒေါ်ဗီဗာဟိန်းရေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးReplyDeletefivehundred28February 27, 2011 at 4:59 AMကွန်မင့်တော ရေးလေ့မရှိပါဘူး ။ ကွန်မင့်တွေကို စိတ်ဝင်စားပါတယ် ။ဂရုတစိုက်လဲ ဖတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးဖြစ်နေလို့ ရေးမိတယ် ။ကွန်မင့်တွေအကုန်လုံးကလဲ တစ်ထေရာတည်း တစ်ထပ်တည်းရယ် ။နောက်တစ်ချက်က ဒီမှာမတင်ခင် Youtube မှာကတည်းက တစ်ခြားဘာသာဝင်တွေမြင်ရင်ဆိုတဲ့ ကွန်မင့်တွေချည်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်နေတယ် ။ အဲလိုဆိုရင် တစ်ခြားဘာသာတွေမမြင်အောင် ဖျက်လိုက်ပါတော့လား ။ Youtube ကနေ ဆွဲထုပ်ပြိး မြန်မာတစ်ပြည်လုံးဖတ်လို့ ရတဲ့ ဒိမှာ ဘာဖြစ်လို့ များလာပြီးတင်ရတာလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားစရာတစ်ချက်ပဲ ။တစ်ခြားဘာသာဝင်တွေမြင်ရင် ကဲ့ရဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ သာထိုင်ပြောနေကြတာရယ်။ မမြင်အောင် ဘယ်လိုဖုန်းဖိထားမလဲ ဆိုတာမစဉ်းစားကြဘူးနော်။ ဖုန်းတန်သင့်တာဖုန်း ဖိတန်သင့်တာဖိထားရမယ်လေ ။ တစ်ခြားဘာသာတွေမှာ လူမြင်လို့ မသင့်တဲ့ ပြဿနာကိုဒိလိုပဲ ဖုန်းဖုန်းဖိဖိနဲ့ ပြေလည်အောင်လုပ်ကြတာပဲ ။ လူတိုင်း လူတိုးမှာ ငယ်ကျိုးငယ်နာဆိုတာ ရှိတာပဲ ။ ကိုယ့်ကျိုးငယ်နာကို ဖုန်းဖိပြီး လူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မျက်နှာထားတည်တည်နဲ့ ရပ်တည်နေကြတာပဲလေ ။ ဘာဖြစ်လို့ လူဗိုလ်ပုံအလည် အထုပ်ဖြည်ပြချင်တာလဲ ။ နောက်တစ်ချက် စဉ်းစားစရာက ဗီဗာဟိန်းနဲ့ များ personal case ရှိလို့ လား ။ ဒီလိုလဲ တွေးလို့ ရတာပဲ ။ ဘာသာဝင်အားလုံးလက်မခံနိုင်တဲ့ အပြုအမူကိုလူတကာအလည်ဖွင့်ပြရင်းနဲ့ ဗီဗာဟိန်းကိုတိုက်ခိုက်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တာပဲ ။ personal case ဆိုရင်တော့ သာသနာနဲ့ ကိုင်ပေါက်ပြီး မရှင်းသင့်ပါဘူး ။ သာသနာရဲ့ အားနည်းချက် ဟာကွပ်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး တစ်ပါးသူကို တိုက်ခိုက်တာဆိုရင်တော့ ဗီဗာဟိန်းမှားတဲ့အမှားထက် ကိုယ်က အဆပေါင်းများစွားအပြစ်ကြီးတယ်။ အလုံးသောကွန်မင့်တွေကတော့ သာသနာပေါ်ထားတဲ့ စေတနာနဲ့ ရေးကြ ပေါက်ကွဲကြတာပဲလေReplyDeleteDanielFebruary 27, 2011 at 5:52 AMCan somebody confirm that pig is viva hein. I never heard of her until I saw the post yesterday. I watched some of her videos. Yes, it's very disgusting. It insults Buddhism.I noticed that in most of her videos background are made with computer effects but the monastery is real. I want to know is she real viva hein. It may be fake. I noticed in her videos that fat girl is only focusing on acting, dancing rather than singing. I doubt that the monk arranged that videos, even it's true there is no reason to describe it. And the monk in this video might be intentionally shot, cos you can edit if accidentally. The monk may be fake one.This can be done by any low class person.All the comments she made in you tube are absolutely ridiculous. she looked like crazy. these comments are made intentionally. If she think she would be famous by making these comments, well, she is the most brainless person in the world. Normal people know audiences will hate her for that and will seriously damage the career.And she uploaded all videos in you tube, as far as i know, we can't use you tube in burma. Even so it will be very difficult to upload so many videos with slow connection.I'd like to say that those videos are made by someone to disgrace Buddhism and singer herself. But if that ugly pig is real viva hein, then shame on her. Let's condemn her.ReplyDeleteကိုတုံFebruary 27, 2011 at 6:07 AMဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာ ကတာ တကယ်ဟုတ်ရိုးမှန်ရင် သာသနာကို ညှိုးနွမ်းစေမှုနဲ. တရားစွဲဆို သင့်ပါတယ်။ သာသနာကို ဘာသာခြား အမြင်မှာ အထင်သေးအောင် ပြုလုပ်တာကြောင့် လွယ်လွယ်ကူကူ ခွင့်မလွှတ်သင့်ပါဘူး။ReplyDeleteThit Sinn SinnFebruary 27, 2011 at 12:57 PMဗမာ စစ်အာဏာရူးတွေက သူတို့ အာဏာကိုမထိယင်ပြီးရော ကြိုက်တာလုပ် ဆိုပြီး ပေယျလကန်လုပ်ထားတော့ တဖြည်းဖြည်းနင့်ဘာသာ သာသနာလဲ ပျက်စီးကုန်ပြီ။ကတဲ့သူက တော့ ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးရှောင်ရန်ဆောင်ရန်မသိလို့ လုပ်တယ်ဆိုယင်တောင် ၀ိနည်း သိက္ခါတွေကိုသိတဲ့ ဆရာတော် သံဃာတော်တွေက ဒါတွေဟာ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ မသိဘူးလား။ဘာသာပျောက်ယင်လူမျိုးပါပျောက်မယ်ဆိုတာ မသိကြဘူးလား။ReplyDeleteeiFebruary 27, 2011 at 3:09 PMwhere is myanmar civilization? ? Myanmar association allow that kind of music video ? Very shamefully about Myanmar monk .She`s irreligionist.ReplyDeleteyvonnehtikeFebruary 27, 2011 at 3:52 PMfivehundred28: I think what you are saying is totally opposite to what we should be doing. We should not be hiding 'the fault'. we should understand 'the fault' and try to find outaway to sort it out, and be careful not to let it happen again. 'Hiding' might help in some of the places, but not here; we should not be ignoring or neglecting what they are doing (only because you are worried that the whole world will know), actually we should let everyone knows (who is concerned)what is happening in Burma and what are the weaknesses so that everyone's force can be used to put it out. Remember, hiding is notasolution...ReplyDeleteDanielFebruary 27, 2011 at 4:26 PMI can't believe it! what's the lunatic girl dancing likeastripper in monastery. if i were government i will arrest her and send to monkey cage.and then what kind of monks who encourage to do that.They might be impostors and get out from holy place & go to hell.ReplyDeletefivehundred28February 27, 2011 at 6:25 PMYvonnehtike ခင်ဗျား ။ ။ ကျွန်တော်ပြောလိုရင်းက ဖုန်းဖိထားဖို့ ချည်းမဟုတ်ပါ ။ နောက်မှ ကိုယ့်ဘာသာဝင်အချင်းချင်း အေးအေးဆေးဆေးလေး ဖြေရှင်းဖို့ ပါ ။ ဆိုပါစို့ ...မိသားစုတစ်စုမှာ ပြဿနာတစ်ခုခု (မိသားစု ဂုဏ်သိက္ခာ ကျစေမဲ့ ပြဿနာမျိုး )ဖြစ်ပြီဆိုရင် ပထမဥိးဆုံး ကိုယ့်မိသားစုထဲတင် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဖြေရှင်းယူရတာပဲလေ ။ ကိုယ့်မိသားစုပြဿနာကို ပတ်ဝန်းကျင်မကြားကြားအောင် ၇ အိမ်ကြား ဂ အိမ်ကြား အော်ပြောနေလို့ ဘယ်သင့်ပါ့မလဲ ။ Youtube မှာကတည်းက ကျွန်တော် သတိထားမိတယ် ။ ဒီလိုပဲ တစ်ခြားဘာသာဝင်တွေမြင်ရင် မသင့်တော်ပါဘူးလို့ ပြောပြောနေပြီး ဆိုဒ်မျိုးစုံလှည့်တင်နေတာပဲ ။ စဉ်းစားကြပါ ။ မှားတဲ့သူတွေက မှားခဲ့ကြပြီ ။အရေးယူသင့်ရင်လဲ လွန်ကြူးတဲ့သူတွေကို သက်ဆိုရာနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီးအေးရာအေးကြောင်း ဖြေရှင်းဖို့ ပြောတာပါ ။ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဘာသာဝင်တွေအတူတူဖြစ်ကြပါတယ် ။ ဆိုတော့ မိသားစုဝင်တွေပေါ့ဗျာ ။ ညီအကိုတွေ မောင်နှမတွေပါနော် ။ ကိုယ့်မိသားစုထဲက ပြဿနာကို အပြင်မထုပ်ရ ဆိုတဲ့ ရှေးလူကြီးသူမ စကားလဲ အရှိသားပဲ ညီအကိုတို့ ရယ် ။ReplyDeletesuFebruary 27, 2011 at 6:45 PM??? ဘာတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မစဉ်းစားတတ်အောင်ပါပဲ ။ ဘုန်းကြီးက စီစဉ်ထုတ်လုပ်တာရယ်၊ ရိုက်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးကို ထည့်ပြထားတာရယ် ... ဒါတွေဟာ တခုခုကို ထိခိုက်စေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာ အသေအချာပါ။ အဓိက ကတော့ ကနေတဲ့ sexy dance ကို မလိုက်ဖက်တဲ့ ခေတ်ပျက်သီချင်းနဲ့တွဲပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သွားရိုက်ထားတာက အရမ်းအောက်တန်းကျပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာပါတဲ့ ဗွီဒီယိုရိုက်နေတဲ့သူဟာ ... တကယ့်ရဟန်း ဟုတ်ဟုတ်/မဟုတ်ဟုတ် ၊ သင်္ကန်းကိုဝတ်ရုံထားတဲ့အတွက် အများအမြင်မှာတော့ ရုတ်တရက်ဘုန်းကြီးလို့ မြင်ကြမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ချင့်ချိန်ပြီး စဉ်းစားကြပါ။ တကယ့်ဘုန်းကြီးအစစ်ကတော့ ဒါမျိုးမလုပ်တာ အသေအချာပါ။ ဗီဗာဟိန်းရဲ့ သောက်ရှက်မရှိ ကနေတဲ့ ကကွက်တွေဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိခိုက်နေပြီး အောက်တန်းကျလွန်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စိတ်ထဲ ထိထိခိုက်ခိုက်ဖြစ်စရာက သာသနာကို စော်ကားနေတဲ့လုပ်ရပ်တွေပါ။ ဘက်ပေါင်းစုံကနေ တားသင့်နေပါပြီ။ လူမျိုး ဘာသာ သာသနာအတွက် ရင်လေးစရာတွေ ထပ်မကြုံပါစေနဲ့လို့ ...ReplyDeletechitFebruary 27, 2011 at 7:02 PMi have never seen before like dancing pig. go to hell ...u can dance like there.ReplyDeleteရန်ကုန်သူFebruary 27, 2011 at 7:26 PMto : fivehundred28 ) ခင်ဗျားကော ယခု ဗီဒီယိုအပေါ် ဘယ်လိုများတိုးတိုးတိတ်တိတ် ဖြေရှင်းပြီး အောင်မြင်ခဲ့ပါသလဲ ဆိုတာသိချင်ပါတယ် ။ ယခုလို youtube မှာပါ သူ့ ရဲ့ဗီဒီယိုကို ပိတ်သွားခြင်းအပေါ် ခင်ဗျားရဲ့ တိုးတိုးတိတ်တိတ်ဖြေရှင်းခြင်းဆိုတဲ့ သက်ရောက်မှူ ဘယ်လောက်ပါပါသလဲ ဆိုတာလဲ သိချင်ပါတယ် ။ReplyDeletesaisanFebruary 27, 2011 at 11:23 PMwhat the fuck is that? other people doing this we can imagine, but the monks themself taking pictures, nobody can understand that. what the fuck, not all monks good to pay respectReplyDeleteThit Sinn SinnFebruary 28, 2011 at 1:22 AMမှားနေကြပြီဗျာ။လုပ်ရက်လိုက်ကြတာ။သားသမီးချင်း နှမချင်းကိုယ်ချင်းမစာကြဘူး။အခုတွေ့ နေရတဲ့သီချင်းက အစစ်မဟုတ်ဘူး။အစစ်ကိုကြည့်ချင်ယင် ဒီမှာကြည့်လို့ ရပါတယ်။http://www.youtube.com/watch?v=hS8UcJwniwUအစစ်မှာ သီချင်းနာမည်ကို မြန်မာလို ရေးထားပြီး တင်တဲ့သူနာမည်က moeewinn ဖြစ်ပါတယ်။အတုကိုတင်တဲ့လူနာမည်က zenithzin ဖြစ်ပြီးသီချင်းနာမေကို အင်္ဂလိပ်လိုပေးထားပြီး အဆိုတော် အမည်ကိုလဲ ဗွီအီးအစား ဗွီအိုင်လို့ စာလုံးပေါင်းထားပါတယ်။ဒီသီချင်းအတုကို တစုံတယောက်က ဘာသာရေးအရ စော်ကားချင်လို့ စနစ်တကျ အစီအစဉ်ရှိရှိလုပ် တယ်ဆိုတာပေါ်လွင်နေပါတယ်။အခုလို အချိန်ကုန်ခံပြီးကျနော်ပြောနေရတာက၁။အဆိုတော်ကိုမထိခိုက်စေချင်တာရယ်။၂။ကျနော်ကိုယ်တိုင်အမှန်ကိုမသိခင်ဒေသအလျေက်ကမင့်ပေးမိတာရယ်။၃။ဒီအဆိုတော်က ကျနော်အားပေးတဲ့အဆိုတော်ဖြစ်နေတာရယ်။၄။သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာလို့ ရယ်။၅။အခြားတွေ့ မြင်ရတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေအနေနင့်လဲနောင်တချိန်မာ အမြင်နှင့်မဆုံးဖြတ်ပဲ သေချာဆန်းစစ်ပြီးလို့ ယုံသင့်မှ ယုံဖို့ သင်ခန်း စာတွေ ရစေချင်လို့ ပါ။လူအချင်းချင်းလှည့်ပတ်ခြင်းကင်းဝေးကြပါစေ။ReplyDeletenakonFebruary 28, 2011 at 2:19 AMဘာသာတရား မှာ သန့်ရှင်းတဲ့နေရာ၊ မသန့်ရှင်းတဲ့နေရာ ဆိုတာမရှိပါ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမို့လို့ ဒီလိုမျိုး မ က ရဘူးဆိုရင် မြန်မာလူငယ်တွေ ဘာလို့ night club သွားရလဲ၊ ဒီ Video ထက် အစပေါင်းများစွာ ပျက်စီးနေ တဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ပြည်သူ့ ၀န်ထမ်း တွေ ထက်စာ ရင်၊ ဒါဟာ အသေး အဖွဲပါ။ အဓိက က စိတ်ဓါတ်ပါပဲ။ ဒီ Video ကိုပဲဝိုင်းပြော နေမဲ့ အစား တခြား စိတ်ဓါတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ တွေ ကိုလည်း မေးခွန်းထုတ် နိုင်ကြပါစေ။ReplyDeleteရန်ကုန်သူFebruary 28, 2011 at 2:40 AMအတုကလဲ vivahein ရဲ့youtube က ကိုယ်ပိုင် Channel မှာတင်လို့ ရပါ့မလား ။အစကတော့ အဲ့လို အတုထင်လို့နောက်မှ သူ့ ကိုယ်ပိုင် Channel မှာ ကိုယ်တိုင်တင်ထားတာတွေ့ လိုက်ရတယ် .။အဲ့ဒီ Channel ကလဲ ဒီ myanmarcelebrity မှာ တင်ပြီး တစ်ရက်အကြာမှာ ဝေဖန်မှူတွေ တအားများလာလို့ဖျက်လိုက်တယ် ။ Channel ကိုကြည့်လိုက်ရတဲ့ လူတိုင်းသိမှာပါ ။ReplyDeleteMin MinFebruary 28, 2011 at 2:46 AMNakon ဆိုတဲ့လူက ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးထင်တယ် ( ဘုန်းကြီးကျောင်းမို့လို့ ဒီလိုမျိုး မ က ရဘူးဆိုရင် မြန်မာလူငယ်တွေ ဘာလို့ night club သွားရလဲ၊ ) ဆိုတဲ့မေးခွန်းက ဗုဒ္ဓဘာသာ သာဆိုရင် မေးစရာမလိုအောင် သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ ။ReplyDeleteSinFebruary 28, 2011 at 3:29 AMအော် viva hein ၇ယ်...ငါတို့တွေနင့်ကြောင့် ငရဲတွေကြီးရပါလားနော်...ReplyDeletengaiFebruary 28, 2011 at 4:49 AMကျွတ်တော် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ပါ..ဒီသီချင်းမှာ အရမ်းရိုင်းတာလဲ မတွေ့မိပါလားး..ဘာမှ အပြစ်မမြင်ပါဘူး.တကယ် စိတ်ရင်းကို ပြောတာပါ။ReplyDeleteminFebruary 28, 2011 at 5:19 AMဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဒီလို sexyအက ကတာမသင့်တော်ဘူးက ချင်ရင်တော clubကိုသွားကပါ အဲဒီsexyအက ကိုVCDရိုက်ချင်ရင် ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်...သာသနာ့နယ်မြေနဲ.မသင့်တော်ပါဘူးReplyDeletesuFebruary 28, 2011 at 5:24 AMသူ့ဘာသာ သီချင်းက အတုဖြစ်ဖြစ်၊ အစစ်ဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ အတုအစစ်ကိစ္စကို ငြင်းစရာမလိုဘူး။ သေချာတာက ရိုက်ထားတဲ့ background ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းထဲမှာ သူကိုယ်တိုင် သရုပ်ပျက်ဝတ်စားပြီး ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်း ကကွက်တွေ ကနေတာ အကုန်လုံးမျက်မြင်ပဲ။ အဲဒါကို ဖြတ်ကပ်ညှပ်လုပ်လို့ မရဘူး။ အစစ်အမှန် ရိုက်ထားတာ။ အဲဒါကိုမှ သူ့ကို လေးစားပြီး ချစ်ခင်တဲ့သူတွေ ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင် အဲဒီသူကို မြန်မာ၊ ဗုဒ္ဒဘာသာလို့ မပြောနဲ့။ ဘယ်သူတွေဘယ်လို night club မှာကက ... အဲဒါ အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှု။ အခု ကိုယ့်မြန်မာပြည် သာသနာနယ်မြေမှာ ကနေတာ ဘာမှ သူ့ဘက်ကနေ နာပြီး ကာပေးနေစရာမလိုဘူး။ ခေါင်းထဲမှာ ဦးနှောက်ရှိတဲ့သူတိုင်း ဒါကိုနားလည်တယ်။ နားမလည်ရင်တော့ ကိုယ့်ခေါင်းထဲမှာ ဘာတွေရှိနေလဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်စဉ်းစားကြပေါ့ ..။ReplyDeletekloFebruary 28, 2011 at 6:13 AMsouth pop maReplyDeleteipodFebruary 28, 2011 at 6:20 AMတော်တော်ဆိုးတာဘဲ.........ReplyDeletemayFebruary 28, 2011 at 8:54 AMngai ခရစ်ယာန်ရော၊မွတ်စလင်းရောပြောပါရစေ၊မင်းတို့ဝတ်ပြုတဲ့ချက်မှာလိင်ဆက်ဆံတာတွေ့တော့ကမ္ဘာကဘယ်လောက်ရယ်လဲမင်းသိလာ။မွတ်စလင်းရော၊နွားလည်လှီးခိုင်တဲ့အလားကိုကိုးကွယ်နေတာ၊ကမ္ဘာလူသားတွေဘယ်လောက်မုန်းတီးလဲမင်းသိလား။အဲဒီအတိုင်ပဲငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာက၊အဲလိုအကျင့်ပျက်ပြီးဖာသည်မ၊လိုကနေတဲ့မိန်းမကိုအားပေးတာငါတို့မုန်းတာဘာမှမဆန်းဘူး။ကမ္ဘာကျော်သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဘာသာမဲ့အိုင်စတိုင်တောင်ငါတို့ဘာသာကိုအဆင့်မြင့်ဆုံးဘာသာလို့သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာ၊ ဒီဖာသည်မလုပ်မှReplyDeleteblack stoneFebruary 28, 2011 at 9:45 AMso look bad.that is not suitable to happen.that place is for people go to worship not the place for shooting like that.ReplyDeletefivehundred28February 28, 2011 at 10:51 AMရန်ကုန်သူ ညီမငယ် ဒီဆိုဒ်မှာ တင်လို့ မရလို့ ဧဒင်ဥယျာဉ်ဆိုဒ်ထဲမှာပဲ ဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ် ။ReplyDeletefivehundred28February 28, 2011 at 10:54 AMဘုရားပွဲတွေကျင်းပပြီး ဇာတ်ကရင် အငြိမ့်ငှါးရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းဝိုင်းတွေမှာပဲ ဇာတ်ခုံထိုး က ကြတယ်နော် ။ သနားပါပေ့ ဗီဗာရယ် နင့်ကျမှ ဇာတ်ခုံမပါလို့အဆဲခံရတယ်လို့ ။ ဘုန်းကြီးတွေကို ကဲ့ရဲ့ချင်ရင်လဲ ဒိလိုပဲ မြန်မာပြည်အနှံ့ ကဘုရားပွဲတွေမှာ ဘုန်းကြီးတွေဦးစီးပြီး စီစဉ်ကျတာပဲလေ ။ အဲဒိတုန်းကများလေငေးလိုက်ကြတာ ။ ပါးစပ်ထဲ ယင်ကောင်ဝင်တာတောင် မသိလိုက်ဘူး ။ ခုမှ ဘာဖြစ်လို့မိုးပေါ်ညံအောင် ကဲ့ရဲ့ကြပါလိမ့် ။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကမြန်မာပြည်အနှံ့ အပြားက ဘုရားတန်ဆောင်တွေက သမီးရီးစားအတွဲတွေရဲ့ မဖွယ်မရာ အပြုအမူနဲ့ နှိုင်းရင် ဘာမှ မပြောပလောက်ပါဘူးနော် ။ ခုလို ဆဲရေးတိုင်းထွာနေကြသူများရော ဘုရားစေတီတစ်ခုခုမှာ ချစ်သူနဲ့ မကြူ ခဲ့ကြဘူးလား ။ကြားဖူးပါတယ် ရွေတိဂုံစေတီတော်ပေါ်က ဂေါပကတွေဆိုရင် ညအိပ်တဲ့အခါ အာရုံခံတန်ဆောင်းတွေပေါ်က ဆင်တုတော်တွေရဲ့လက်တော်မှာ ခြင်ထောင်ကြိုးချည်းပြိးအိပ်ကြတယ်တဲ့ ။ ဒါတင် ဟုတ်ပါရိုးလား ....ခြင်ထောင်ထဲမှာကြေးစားမ ညငှက်ကလေးတွေကိုခေါ်ပြီး ကြူကြတာလောက်တော့ မဆန်းပါဘူးနော် ။ReplyDeletefivehundred28February 28, 2011 at 10:56 AMမြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုဘုရားပွဲတွေမှာ မင်းသမီးတွေ က ကြ ခုန် ကြရင်တော့ လက်ခုပ်တွေ နားကွဲမတက်တီးကြတယ် အားပေးကြတယ် ။ ဘုရားပွဲတွေမှာ လူရွင်တော်တော်တွေရဲ့ ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်း ပြတ်လုံးတွေကိုတော့ ပိုက်ဆံအကုန်ခံ အိပ်ရေးပျက်ခံ အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ အားပေးကြတယ် လပ်ခုတ်သံတွေနဲ့ ဆူညံနေကြတယ် ။ မေးလိုက်ချင်တယ.်..... ဗီဗာဟိန်းကျမှ ဇာတ်ခုံမပါလို့ဆဲရေးတိုင်းထွာသံတွေမိုးပေါ်ထိ ပျံ့ လာတာလားလို့ လေ ။ ဒိလိုပဲ ရပ်ရွာဘုရားပွဲတွေမှာ ဘုန်းကြိးတွေ ဦးစိးပြီး စီစဉ်တဲ့ ပွဲတွေအများကြီးပါ ။ အဲဒီတုန်းကရော ဒီလူတွေပဲ အာသာ တငမ်းငမ်းနဲ့ ငေးမောခဲ့ကြတာပဲလေ။ စဉ်းစာကြပါ ။ ခုလို ပရိတ်သက်တွေဝိုင်းဝန်းဆဲရေးနိုင်အောင် ဘယ်သူက အစပျိုးပေးလိုက်တာလဲဆိုတာ ။ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်နေတယ်ဆိုတာ ။ReplyDeletefivehundred28February 28, 2011 at 10:57 AMရန်ကုန်သူ ညီမငယ် ။ ။ ဒိနေရာမှာ အောင်မြင်ဖို့ လုပ်နေတာမဟုတ်ပါ ။ ဘယ်သူသာစေ ဘယ်သူတော့ နာစေ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လဲ မရှိခဲ့ရိုးအမှန်ပါ ။အခုပြဿနာမှာ သာမန် က ရိုး က စဉ်ပါပဲ ။ ဒီလိုပဲ ဒို့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အဆက်ကတည်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေထဲမှာ ဇာတ်ခုံဆောက်ပြီးမင်းသမိးတွေ က ကြ ခုန်ကြ။ လူရွင်တော်တွေကနေ နောက်လိုက်ပြောင်လိုက် တစ်ခါတစ်ရံ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းညစ်ညစ်ညမ်းညမ်းတွေပြောကြတာတောင်ပါသေးတာပဲ ။ ခု ဗွီဒီယိုမှာတော့ ဇာတ်ခုံမပါတာတစ်ခုပဲ ပြောစရာဖြစ်တယ်။ ဒါကို ပုံကြီးချဲ့ ပြီးတော့မကြားဝံ့မနာသာ ၀ိုင်းဝန်းဆဲရေးကြ ဘုန်းကြီးနဲ သာသနာတော်ကို အပြစ်ဖို့ ကြနဲ့တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီထင်တယ် ။ ကွန်မင့်တွေတော်တော်များများကလဲ ဆဲရေးတိုင်းထွာတာက များတယ် ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ချက်များဖြစ်နေလေရောသလားတောင် စဉ်းစားမိတယ် ။ ဆိုပါစို့...လူတစ်ယောက်ကနေ user အမျိုးမျိုးနဲ့ ဝင်ပြီး ရောသမမွေလေသလားပေါ့ဗျာ ။ သာမန်ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်များဆိုရင် ဒီလိုချည်းဆဲရေးကြလိမ့်မယ်မထင်မိဘူး ။ အစပျိုးလိုက်တဲ့ ကွန်မင့်တွေကနေ တစ်ဆင့် လာဖတ်သမျလူတွေ Negative အမြင်ဘက်ကိုပဲ မြင်သွားနိုင်ပါတယ် ။ အဲလိုပဲ Positive ဘက်ကိုလဲ အမြင်ပြောင်းသွားနိုင်တာပဲလေ ။ ကွန်မင့်အများစုက ဆဲရေးတိုင်းထွာတာတွေဖြစ်နေတော့ လာဖတ်တဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သက်တွေလဲ Negative ဘက်ကချည်းပဲ မြင်တော့မှာပေါ့ ညီမရယ် ။ ဒီလိုဆိုရင် သူတို့ ရဲ့လုပ်ပုံတွေကရော မှန်လို့ လားလို့ မေးစရာရှိပါတယ် ။ ဟုတ်ပါတယ် ။ မှားတဲ့သူတွေက မှားကြပြီးပြီ ။ အဲဒီအမှားက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကိုယ်းကွယ်နေတဲ့ ဘာသာတစ်ခုတည်းက အမှားနော် ။ အဲလိုအမှားမျိုးကို ဘာသာမျိုးစုံမြင်နိုင်တွေ့ နိုင်တွေ့ နိုင်တဲ့ ဆိုဒ်တကာ လှည့်ပြီးပြနေတာတော့ မသင်ဘူးထင်တယ် ညီမ ။ နောက်ထပ်တစ်ခုက အများတကာအလယ် လိုက်ပြနေရုံတင်မကဘူး ။ အများပြည်သူ အတွေးအမြင်ပြောင်းလဲအောင် ဒေါသပုန်ထအောင် တစ်ခြားဘာသာဝင်တွေပါ အထင်မြင်သေးအောင် လှုံ့ ဆော်တဲ့ကွန့် မင့်မျိုးကိုပါ တစ်ဆက်တည်း အစပျိုးရိုက်ထဲ့ပေးလိုက်တော့ ဗီဗာဟိန်းမှားတဲ့ အမှားထက်အဆပေါင်းများစွာမှားနေတယ်ညီမ ။ မြန်မာပြည်အနှံ့ ဘုရားပွဲတွေမှာ ဒိလိုပဲ အငြိမ့်တွေ အကတွေ ဖျော်ဖြေရေးတွေရှိတာပဲ။ ဗီဗာဟိန်းကျမှ ဇာတ်ခုံမပါလို့မျက်နှာငယ်ရသလိုဖြစ်နေပြီ ။ နောက် ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းထဲ က တာများ အဆန်းလုပ်လို့ ။ Holy place ဖြစ်လို့ကဲ့ရဲ့ကြတာဆိုရင် မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်က ဘုရားတွေမှာ သမိးရီးစားတွေရဲ့ မဖွယ်မရာတွေဆိုရင်ခက်ရချည်ရဲ့။ReplyDeletefivehundred28February 28, 2011 at 11:00 AMဒီအထဲက ပရိတ်သက်များရော ဘုရားပွဲတွေလိုက်ပါ အားပေးဘူးပါသလား ။ ဒါမှမဟုတ် ချစ်သူလေးများနဲ့ ရော စေတီပုထိုးစောင်းတန်းတွေမှာ ကြူခဲ့ဖူးကြပါသလား ။ တကယ်သာသနာတော်နဲ့ မသင်တော်ဘူးထင်ရင် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းပါReplyDeletesaisanFebruary 28, 2011 at 12:10 PMi m budhist but mr. ngai u know many christian girls sleeping muslim guys in dubaiReplyDeleteMin MinFebruary 28, 2011 at 8:01 PMfivehundred28 ကစကားကို အမျိုးမျိုးလုပ်နေတာပဲနော် ။ အကြောင်း အရာတစ်ခုတည်းကိုလဲ ဦးတည်မပြောဘူး ပထမပြောတော့ အကြောင်းအရာတစ်ခု မနိုင်ရင်နောက်တစ်ခုပြောနေတာပဲ ။ ကဲ ယနေ့ မှ စပြီး ဘုန်းကြီးများ ဒါရိုက်တာ လုပ်ပြီး ၊ မင်းသမီးများ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ဘုရားကျောင်းကန်များ နှင့် ဘုန်းကြီးများရှေ့တွင် မဖွယ်မရာ ကပြခြင်း အား ထောက်ခံကြပါ ။ကောင်းသော အပြုအမှုဖြစ်သည်တဲ့ ။ ကောင်းပါလေသည်....( ပွဲ ရာသီဟူသည့် အခြေအနေနှင့်အချိန်အခါ မလို ) fivehundred28 အား ထောက်ခံပေးခြင်းဖြစ်သည် ။ မိမိအား ဆဲကြရန်မလို ။ReplyDeleteMgFebruary 28, 2011 at 9:52 PMThis bitch is totally out of control. Heyy Viva Hein..have you ever looked at yourself in the mirror? You look so fucking gross. Stop shaking your big fat butts in the monastery. This is definitely inappropriate and not acceptable in Burma. By the way your songs suck! Monk – are you serious? What are you doing with the camcorder? I think the only thing you should be carrying around is the Buddhist beads. Nothing else! God..this is way beyond too bad. Bo Hein – your bitch is off the leash. Just make sure you tie her up really tight this time.ReplyDeletefivehundred28February 28, 2011 at 9:55 PMအော် ခက်ပါလား ။ ညီအကို min min ရယ် ။ အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုပဲ ဦးတည်မပြောဘူးတဲ့ ။ ဒဲ့ရော တွက်ရော စုံနေအောင်ပြောထားတာတောင် နားမလည်သေးဘူး ။ အခုလုပ်ပုံက ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်းကွယ်သောဘာသာတရားသည် ဒီလိုပြုမူတက်ပါသည်လို အရပ်တကာလှည့်ပြောနေသလို့ ဖြစ်နေတာနဲ့ မနေနိုင်လို့comment ပေးမိပါတယ်ဗျာ ။ ကျွန်တော် ဦးတည်းပြောနေတာကလဲ သာမန် တွေ့ ရိုး တွေ့ စဉ် ပွဲလမ်းပွဲလမ်းသဘင်ကိုပဲ ဒိလောက်ပုံကြီးချဲ့။ ပြီး လူတွေကနေ ဗီဗာဟိန်းရယ် သာသနာ နဲ့ဘုန်းကြီးတွေအပေါ် အထင်အမြင်မှားစေတဲ့ လှုံ့ ဆော်ကွန်မင့်မျိုးနဲ့ သွေးထိုးနေတဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးလို့ ပြောနေပါတယ် ညီအကိုရယ် ။ ကျွန်တော်ထင်တယ် ။ ဒီထဲမှာတင် user တစ်ဥိးတစ်ယောက်တည်းကနေ နာမည်အမျိုးမျိုးတပ်ပြီး ဆဲရေးထားကြတာက ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုခု ရှိကို ရှိနေမယ်ထင်တယ် ။ အာလုံးသော ကွန်မင့်တွေကို မဆိုလိုပါ ။ တစ်ချို့ ကွန်မင့်တွေကတော့ တကယ် ကိုယ့်ဘာသာကို မြတ်နိုးလွန်းလို့ ပေါက်ကွဲတဲ့လူတွေလဲ ပါတယ် ။ အဲလိုပေါက်ကွဲအောင်လဲ လမ်းကြောင်းပေးထားတာပဲလေ ။ ဘာမှ ရေရေရာရာ မသိသေးတဲ့ ဒို့ ပြည်သူတွေကို ဂျပိုးကို ကိုင်ပြပြီး ဒါက လိပ်ကြီးပါလို့ လိုက်ပြောနေသလိုဖြစ်နေတယ် ညီအကို။ (ကဲ ယနေ့ မှ စပြီး ဘုန်းကြီးများ ဒါရိုက်တာ လုပ်ပြီး ၊ မင်းသမီးများ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ဘုရားကျောင်းကန်များ နှင့် ဘုန်းကြီးများရှေ့တွင် မဖွယ်မရာ ကပြခြင်း အား ထောက်ခံကြပါ ။ကောင်းသော အပြုအမှုဖြစ်သည်တဲ့ ။ ကောင်းပါလေသည်...) ဒါက ရွေညီအကို Min Min ကနေ ဒီစကားကို ကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်လို့ စွပ်စွဲထားပါတယ် ။ ကျွန်တော်ရေးခဲသမျသော ကွန်မင့်တွေကို လိုက်ဖက်ကြည့်ပါ ။ ကျွန်တော် အဲလိုစကားမျိုး လုံးဝ မသုံးနှန်းခဲ့ပါဘူး ။ အဲလိုမျိုးလဲ မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူးဆိုတာ စာဖတ်ပရိတ်သက် သိပါတယ် ။ReplyDeleteMgFebruary 28, 2011 at 9:56 PMto Fivehundred28 - SHUT THE FUCK UP, YOU ASSHOLE!! min ka thu lin-nge lar?ReplyDeleteInternetpageFebruary 28, 2011 at 10:13 PMကွန်မင့်တော့မရေဖူးဘူး..ကြည့်ယုံသက်သက်ပဲကြည့်တတ်တယ်..ခုတော့နဲနဲဝင်ပါကြည့်မလားလို့.....အနုပညာအသိုင်းအ၀ိုင်းကအနုပညာအသိုင်းအ၀ိုင်းပဲတစ်ပိုင်းထားလို့ရတယ်..ဘုန်းကြီးတွေကပါစရာမလိုဘူး..စီစဉ်စရာလဲမလိုဘူးထင်ပါတယ်...ဘုန်းကြီးနဲ့အဆိုအကလားလားမှမအပ်စပ်ပါဘုရား....ဘာဖြစ်လို့များ..စီစဉ်သူမှာနာမည်တပ်ပြီးလုပ်ရတာလဲ....အကယ်လို့သိပ်လုပ်ချင်သပဆိုလဲ..လူဝတ်လဲပြီး...ဒါရိုက်တာမကလို့ ဒါရိုက်တာအဘပဲလုပ်လုပ်..ဘယ်သူမှဘာမှမပြောပါဘူး...ခုတော့... သာသနာကိုပါ...အရှင်ဘုရားရဲ့လုပ်ရပ်နဲ့တင်...အားလုံးက၀ိုင်းဝန်းစော်ကားခံနေရသလိုဖြစ်နေပြီ...ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့်..တစ်သာသနာလုံးအပုတ်ခံရကိန်းဆိုက်နေပြီဟို..အကောင်မကလဲ... နာမည်ကြီးချင်တာများ...အွန်လှိုင်းပေါ်မှာအဲလိုတင်မဲ့အစား...အော..ကားရိုက်ပြီးတင်လိုက်ပါတော့လား..တစ်တိုင်းလုံးတပြည်လုံးနာမည်ကြီးယုံတင်မကဘူး...အိမ်မှာလူတွေစီစီကားကားတောင်ဖြစ်သွားဦးမယ်....။မပြောဘူးဆိုမှ..ပြောမိပြန်ပြီ.....ဒီလိုအခွေမျိုးကိုကျတော့..မြန်မာနိုင်ငံစီစစ်ရေးထုတ်လုပ်ခွင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အကောင်တွေကျတော့ရော...ဘာလို့ခွင့်ပြုခဲ့သလဲမသိတော့ဘူး...ဧကန္တအထုပ်ကြီးကြီးပိုက်သွားပြီထင်ပါ၏...။အော်....တရားကျပါဘိ... ဒီလိုမျိုးကိုတင်ထားမဲ့အစား..ဖြုတ်ပစ်လိုက်တာမှသင့်တော်ပါ၏...လူမမြင်ခင်သူမမြင်ခင်..စီစဉ်ကြစေလိုပါ၏...။ReplyDeletetwoMarch 1, 2011 at 2:04 AMViVa Hein တဲ့..ု​ကား​က​တ​ည်း​က ဘာ​နည်မည်လဲေ​ပါ့...သီချ​င်းေ​တွ​က​လ​ည်း နတ်သီချ​င်းေ​တွ..တီး​လုံး​ကေ​တာ့..အရ​က်ေ​သာ​က်ြ​ပီး​မူး​တဲ့​အချိန်က​လို့ေ​ကာ​င်း​တဲ့​သီချ​င်းေ​ပါ့...ေ​ပါ​ရ​က်...ဂုဏ်သိ​က္ဘာ မ​ရှိ​ရက်တာ​ကေ​တာ့..ေ​ပါ့​တန်တန်ဆို​တာ​သိ​နိုင်ပါ​တ​ယ်...Online သုံဲးု​က​တဲ့​သူေ​တွ​အား​လုံး​၀​င်ေ​ရး​ရ​င်ေ​တာ့..သူ​မေ​တာ့​နာေ​တာ့​မ​ယ်..အမျာုး​ကီး​၀​င်ေ​၇ုး​က​လို့ ..Viva Hein တေ​ယာက်နာ​မ​ည်ု​ကီး​သွား​ဦး​မ​ယ်..နာမ​ည်ု​ကီး​မှ ကျော်ေ​ဇာတာ​မ​လား..ြ​မန်မာ​နိုင်ငံ​ကလူေ​တွ​က...မ​ဟုတ်တာ​နာမ​ည်ု​ကီးေ​န​တာေ​တွ​ကို ...ရပ်တ​န်း​ကရ​ပ်ေ​အာ​င်..လုပ်ဖို့ ​ပဲ​လို​ပါ​တ​ယ်..ဒီ​သီချ​င်း​ကို ဖွ​င့် လို့ ​မ​ရေ​အာ​င်..Harm လို့ များ​မ​ရု​က​ဘူး​လား ဗျာ....ု​က​ည့်ေ​လေ​ဒါသ​ထွ​က်ေ​လ​မို့ ​ပါ..ကိုယ်နဲ့ေ​တာ့ ဘာ​မှ​မ​ဆိုင်ပါ​ဘူး..မ​လုပ်သ​င့်​တာ​လု​ပ်ေ​န​တယ်ထင်လို့ Comment ၀​င်ေ​ပး​ရုံ​ပါ...ReplyDeleteyvonnehtikeMarch 1, 2011 at 2:34 AMfivehundred28: all what you are saying has no proper concern with the topic. I agree with Min Min.ReplyDeletelinnminkhantMarch 1, 2011 at 7:03 AMဟိုက်.............. တွေ့ ပဟေ့ ငါ့ခြံထဲက လွတ်သွားတဲ့ ဝက်မ ဘယ့်နှယ့်ခုမှတွေ့တော့တယ် လိုက်ရှာနေတာကြာပေါ့ ဟိုမယ်....စောင့်နေကြရတာ ဝက်သားစားမဲ့သူတွေ အားနာစရာ သူက ဒီမှာလာကဲနေတာကို ငါ့ခြံထဲမှာပေါက်တဲ့ဝက်မ ငါ့ဝက်မ လာထား ..........ဒယ်အိုးထဲ ဆီမပါပဲ အခြောက်တိုက် လှော်ပြစ်မယ် ဒင်းကိုကြာကြာလှော်မှ ဒယ်အိုးထဲပြောပါတယ် ကျန်တာမတွေးကြနဲ့နော်..........ဆက်လုပ်ဟေ့အားပေးသွားတယ် ဒုတ်နဲ့..........ReplyDeleteThit Sinn SinnMarch 1, 2011 at 1:56 PMကျနော်အထက်မာ ကမင့်ပေးပြီါ်ပါပြီ။အခုမြင်နေရတဲ့ဗွီဒီယိုဟာ အစစ်မဟုတ်ပါဘူး။အစစ်မာ နောက်ခံဘက်ကရောင်းက ကရ၀ိတ်ဟိုတယ်လိုမျိုး ဘာသာရေးနှင့်မဆိုင်တဲ့နေရာတွေပါ။ထုတ်လုပ်သူကလဲ ဆရာတော်တွေမဟုတ်သလို ကင်မရာမင်းကလဲ ဆရာတော်တွေမဟုတ်ပါဘူး။အခုမြင်နေရတာက တယောက်ယောက်က တမင်တကာ အစီအစဉ်ရှိရှိနင့် ဘာသာရေးကိုစော်ကားချင်လို့ လုပ်ထားတာ။ဒီနေ့ ခေတ်ကာလမှာ ဒီထက်အများကြီးအတုလုပ်လို့ ရနေတယ်ဆိုတာ ဘာဖြစ်လို့ မစဉ်းစားတတ်ကြတာလဲ။အရမ်းကိုခေတ်နောက်ကျနေကြပြီလား။အစစ်ကိုကြည့်ချင်ယင့် အခုပုံမှာကလိလုပ်ပြီး ကြည့်လို့ မရပါဘူး။အစစ်ကိုဒီမှာကြည့်ပါ။http://www.youtube.com/watch?v=hS8UcJwniwUခေါင်းကိုသုံးကြပါဗျာ။ReplyDeleteThit Sinn SinnMarch 1, 2011 at 2:04 PMသားသမီးချင်း နှမချင်းကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေး နည်းနည်းလေးတောင်မထားနိုင်ကြတော့ဘူးလား။လူတွေတရားပျောက်နေကြပြီလား။ကျနော်ပေးထားတဲ့လိပ်စာကိုတချက်လေးကော်ပီလုပ်ပြီး inter ကိုခေါက်လိုက်ယင်အစစ်ကိုတွေ့ နိုင်မှန်းသိပါယင့်နင့်ဘာဖြစ်လို့ အမှန်ကိုမရှာဖွေကြပဲ သူများသားသမီကို ပုတ်ခတ်စော်ကားနေကြတာလဲ။အဲဒီမှာ ရိုက်ကွင်းရိုက်ကွက်တွေ ထုတ်လုပ်သူတွေ အကုန် ပါ ပါတယ်။ဆရာတော်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကိစ္စဟာ ဘာသာခြားတယောက်ရဲ့ ယုတ်မာတဲ့အကြံနှင့်လုပ်ပေးလိုက်တာကို အသိပညာနည်းသူတွေကိုထင်ရာမြင်ရာလျှောက်ပြောနေကြတော့ တဘက်သားမှာ အရမ်းထိခိုက်ရတယ်ဗျာ။မြန်မာလူမျိုးတွေ တော်တော်တရားပျောက်နေကြပြီပဲ။ReplyDeletekyawkyawMarch 1, 2011 at 11:08 PMThit Sinn Sinn ဂေါက်သီး ..နေကောကောင်းရဲ့လား ဘက်ကရောင်းကိုအဲ့လိုလုပ်လို့ရမလား သချာကြည့် ပညာမတက်တဲ့ ခလေးတောင် ခွဲတက်တယ် မင်မမ က ကနေတာ တီကောင်ဆားနဲ့တို့ထားသလိုပဲနော် မျက်လုံးပါလား ဂေါက်ဝက်မ ကိုအားပေးမနေနဲ့ဂေါက်သီး ..ReplyDeletekowintMarch 1, 2011 at 11:47 PMသာသနာကို ပျက်စီးအောင်၊ ဘုန်းကြီးတွေကို အထင်သေးအောင် တမင်တကာ ကြံစည်ပြီးတော့ လုပ်တာလို့ပဲထင်ပါတယ်။ တော်တော်မိုက်ရိုင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ။ အားလုံးပဲ ဘုန်းကြီးတွေကို မပြစ်မှားကြပါနဲ့။ReplyDeleteSiMarch 1, 2011 at 11:49 PMဟားဟားဟား ကွန်မန့်တွေဖတ်ရတာနဲ့ သူတို့တွေရေးထားတာ ကိုယ်ပြောချင်တာတွေ အကုန်ပါသွားပြီ .. တခုပဲသိချင်ပါတယ် ဒေါ်ပီပါဟိန်းအနေနဲ့ တောဝက်မကြီး ကရင်နီအကိုက်ခံနေရသလို ကတဲ့ အဲဒီအကကို ဘယ်မှာများ သွားသင်လာသလဲသိချင်ပါတယ် ...ReplyDeletenaungMarch 4, 2011 at 2:43 AMသောက်ကောင်မကြီးကလဲ ဝက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ သောက်ရှက်ကိုနဲနဲမှမရှိဘူး...ကနေတာကလဲ ငါပြောလိုက်ရင်မကောင်းရှိတော့မယ်...ReplyDeletesanMarch 5, 2011 at 7:09 PMI absolutely agree with fivehundred28.I saw some people who said themselves are buddhists condemning the monk.In fact,no matter what religion,people should understand ,forgive and explain the others who make mistakes.Everyone sins and this is the nature of human.We accept and correct our mistakes if the others explain well and politely.ReplyDeleteCherryMarch 6, 2011 at 9:26 PMကျမ ကသူများရေးထားတဲ.commentsတွေအရင်ဖတ်ပြီးမှvideoကိုကြည်.မိတာပါBuddhists တွေဒေါသဖြစ်တာလဲမဆန်းပါဘူး ကျမကChristianပါ ကျမတောင်မှကြည်.ရင်းကတော်တော်စိတ်ပျက်မိတယ် သူ.အတွက်နေရာတော်တော်ရှားတယ်ထင်တယ် ၀တ်ထားတာကလဲအရူးမကြီးလိုပဲ သူကနေတဲ.အရှေ.မှာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေရှိနေမှာပဲထင်တယ် ကနေတဲ.ပုံစံက ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို တမင်လှုပ်ပြနေသလိုဖြစ်နေတယ် အပြင်လူတွေကြည်.ရတာလဲမသင်.တော်ပါဘူး ဘာမှမစဉ်းစားဘူးထင်တယ် အရူးမReplyDeleteCherryMarch 7, 2011 at 12:06 AM@saisan don't tell like that i know very well what's the hell going on in dubai, myamnar ladies, not only christian lady , that's u know what i mean. take care your words OK .don't be make problem within religions. think about it .now this video case is not fighting religions.ReplyDeletekaryanMarch 8, 2011 at 1:26 AMevenaperson with half-brain wouldn't do like that. whatafaggot!!ReplyDeleteKyingMarch 8, 2011 at 8:07 AMကြည် ချင်တာ open lo lae ma ya buReplyDeletekyawyelinMarch 20, 2011 at 9:06 AMတော်တော်ရယ်ရတာပဲနော်...ဘုန်ကြီးကျောင်းထဲမှာလှုပ်နေလိုက်တာများ..ဖာမတွေကသလို ပဲ...သူ့ ကိုယ်သူမှအားမနာဘူး..ကပြီးတာနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးမထနိုင်ပါစေ....အရှက်ကိုမရှိဘူး...ဒီလိုအဆိုတော်မျိုးမအောင်မြင်ပါစေ...ချက်ချင်းမြေမျိုပါစ...ဗီဗာဟိန်းဆိုတဲ့ ဝက်မရေ..ဒီထက်ပိုလှုပ်နိုင်ပါစေ..တစစီပြုတ်ထွက်သွားပါစေ..ကျက်သရေကိုယုတ်တယ်ဘယ်တော့မှအားမပေးဘူး..အသံကြားတာနဲ့ ဝေးဝေးကရှောင်မယ်မမဝက်မကြီးဗီင်္ဗာဟိန်းရေReplyDeletemyathwayMarch 20, 2011 at 8:54 PMတော်တော်ကိုဆိုးရွားလွန်းပါတယ်ReplyDeleteallMarch 31, 2011 at 8:15 PMjeep tue ငရဲမကြောက် ဗီဗာဟိန်းတယောက် ဆရာတော်ကို ဖင်နဲ့ပေါက်ReplyDeleteလှMay 18, 2011 at 12:07 PMသာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနအသက် ၇၀ကျော်နေပြီဖြစ်သော သာသနာရေးဝန်ကြီး သူရမြင့်မောင်သည်ဝန်ကြီးအဆင့်အတန်းများထဲတွင်ဆင်းရဲသူဖြစ်သည်။ နောက်မိန်းမယူထားပြီးအိမ်ထောင်စုနှစ်စုပြဿနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသူဖြစ်သည်။ယင်းသို့နောက်မိန်းမယူရခြင်းမှာဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးမှပေးစားသဖြင့် မငြင်းသာ၍ယူရသည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်း၏တပည့်အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများထံမှသိရှိရသည်။နောက်မိန်းမနှင့်နေထိုင်ရန်အတွက်နေပြည်တော်တွင် သိန်းထောင်ချီတန်အိမ်သစ်ကြီးတစ်လုံးဆောက်လုပ်လျက်ရှိရာအိမ်သစ်အတွက်ငွေကြေးများကို ၄င်း၏ကိုယ်ပိုင်ငွေမှကုန်ကျခံခြင်းမရှိဘဲဘာသာခြား(ကုလားများ)ထံမှအလှူခံကာဆောက်လုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ၀၄-၀၅ခုနှစ်တွင်အစိုးရဌာနများပိုင်ဆိုင်သောသက်သာချောင်ချိရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ရန်ပုံငွေများကိုနိုင်ငံတော်သို့ပြန်လည်အပ်နှံရမည်ဖြစ်သော်လည်း ဥပဒေများကိုချိုးဖောက်ပြီးယင်းရန်ပုံငွေများအားသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၏သီးခြားရန်ပုံငွေဟုငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်ပြောင်းကာမောင်ပိုင်စီး၍ ၄င်း၏ကိုယ်ကျိုးအတွက်သိန်းထောင်ပေါင်းများစွာသုံးစွဲလျက်ရှိပြီး ယနေ့အချိန်အထိဘဏ္ဍ/အခွန်ဝန်ကြီးဌာနသို့လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်သို့လည်းကောင်းပြန်လည်အပ်နှံခြင်းမရှိဘဲသေးပါ။ ယင်းသို့နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေများအားကိုယ်ကျိုးသုံးစွဲနေခြင်းကို ၄င်း၏ညီအကို စစ်ဥပဒေချုပ်ဟောင်းကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးမောင် နှင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ကြီးများသိရှိရန် ရေးသားလိုက်ပါသည်။ReplyDeleteလှMay 18, 2011 at 12:07 PMFuck သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနReplyDeleteလှMay 18, 2011 at 12:08 PMFuck သာသနာရေးဝန်ကြီး သူရမြင့်မောင်ReplyDeleteလှMay 18, 2011 at 12:10 PMFuck ဗီဗာဟိန်းReplyDeletezaw moeJuly 30, 2011 at 10:21 PMဗီဗာဟိန်း ငါပြောလိုက်ရင်မကောင်းရှိတော့မယ်....ကျက်သရေကိုယုတ်တယ်.......ReplyDeleteXxxkinxxXNovember 7, 2011 at 7:19 PMI am not Buddhist but i think Buddhist people are not suppose to dance likeaslut in the Monastery .....Shame on that fat bitchReplyDeleteAdd commentLoad more...